कपाल र जुँगा पाल्दा फेरिएको अनमोल लुक्स ! - Glamorous Icon
Home›GIcon News›कपाल र जुँगा पाल्दा फेरिएको अनमोल लुक्स !
युवा स्टार अनमोल केसी यतिबेला फिल्म ‘कृ’को वर्कसपमा व्यस्त छन् । छिट्टै नै फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेको फिल्मको अभिनय अनि पात्रलाई निखारता दिँदै गर्दा अन्य समयमा पनि प्राय: बाहिर नदेखिने अनमोल गुपचुप जस्तै छन् ।
सार्वजनिक तश्विरमा अनमोलको पुर्णत: लुक्स नै परिवर्तित छ । दाह्री, जुँगा र लामो कपाल सहितमा अनमोललाई हेर्दा एकछिन जो कोहि पनि झुक्किन सक्छ । विल्कुल फरक गेटअपमा उनलाई देख्न सकिन्छ ।फिल्मको तयारी हुँदै गर्दा लुक्स समेत बाहिर नल्याउने अठोट सहित अनमोल काममा लाग्दा अनेकन बहानामा उनका तश्विरहरु भने बाहिर आईरहेका छन् । जसको पछिल्लो उदाहरण एक फ्यानसँग होलीको दिन उनले खिचाएको तश्विर पनि हो ।